#Pogba iyo Hazard oo ku biiraya Real Madrid De Gea oo laga yaabo inuu ka tago Man United - Get Latest News From Horn of Africa
#Pogba iyo Hazard oo ku biiraya Real Madrid De Gea oo laga yaabo inuu ka tago Man United
Xili ciyaareedkan 2018/19 ayaa maraya heer gabo gabo ah isla markaana waxay haddaba kooxaha waa wayn ee Yurub bilaabeen in ay suuqa ka raadsadaan ciyaartoyda ay xili ciyaareedkan soo socda ku soo xoojin doonaan safafka kooxahooda.
Kooxaha Real Madrid, Man United iyo Bayern Munich ayaa la ogyahay in ay noqon doonaan afarta kooxood ee lacagta ugu badan suuqa ku bixin doona iyaga oo ujeedooyin kala duwan iskugu diyaarinaya xili ciyaareedka soo socda waxayna haddaba si buuxda ugu jiraan suuqa kala iibsiga oo ay ciyaartoy ka raadinayaan.
Dhamaan kooxaha yurub ayaa sii qiimaynaya suuqa kala iibsiga iyo ciyaartoyda ay dalban karaan marka uu suuqa waqtiga dheer ee xagaagu furmo dhamaadka xili ciayareedkan dhawrka kulan ka hadhsan yihiin.
Real Madrid ayaa sii xoojisay hamigeeda ah in ay la soo wareegto xiidga khadka dhexe ee Pual Pogba waxayna Los Blancos rajeyneysaa in wakiilka Pogba ee Mino Riola uu Man United cadaadis ku saari karo in ay Pogba ka iibiyaan Madrid iyada oo Riola uu lacag badan ku heli karo in Pogba uu Santiago Bernabeu ku soo biiro. (Marca)
Kooxda reer Spain ayaa sidoo kale qorsheyneysa iney dalab cusub ka gudbiso Eden Hazard, walow ay Blues mar walba dooneyso adduun dhan 100 Malyan oo Pound. (Telegraph)
Manchester City ayaa muhiimada kowaad ee khadka dhexe ee ay suuqa kala iibsiga ka leedahay ka dhigatay xidiga kooxda Atletico Madrid ee Rodri kaas oo ay diyaar u yihiin in ay bixiyaan lacagta heshiiskiisa lagu burburin karo oo dhan €70 milyan yuro. (Goal)
Kooxda Ac Milan ayaa dooneysa iney tababare ka dhigato Mauricio Pochettino si uu badal ugu noqdo Gennaro Gattuso, sidoo kalana waxey gacanta u galin doontaa 300 Malyan oo Pound. (Mirror)